Madaxweyne Xasan oo ka laabtay ballan uu horay u qaaday “Muxuu ahaa ballankaas?” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka noqday ballan uu horay u qaaday, kaasoo ahaa inuusan cafin doonin qof maxkamadi xukuntay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wax yar kadib markii xilka loo doortay shacabka Soomaaliyeed u sheegay inuusan cafis u fidin doonin qofkii maxkamadi dambi ku hesho, islamarkaana qofkaas dhameysan doono xukunka lagu rido.
Waxaa shalay xabsiga dhexe ee Muqdisho laga sii daayey taliyihii hore ee ciidanka Asluubta Soomaaliya, Ex Jen. Cabdi Maxamed Islmaaciil, kaasoo maxkamada ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay xabsi daa’in kadib markii lagu eedeeyey inuu xiriir la yeeshay Alshabaab, isagoo ahaa taliyaha ugu sarreeya ciidanka Asluubta Soomaaliya.
Jeneraalkan hore oo shalay xabsiga laga sii daayey ayaa warbaahinta u sheegay in ladu sii daayey cafis uu u fidiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in intii uu xabsiga ku jiray oo aheyd ilaa 6 bilood ay si wanaagsan ula dhaqmeen ciidanka Asluubta Soomaaliya oo u xilsaaran ilaalinta xabsiyada.
Bishii December ee sanadkii 2012 ayaa maxkamadda ciidamadu Ex Jen. Maxamed Cabdi Ismaacil isagoo baxsad ku maqan ku riday xukun ah:
1- In lagu xukumay xarig xabsi daa’in ah inta noloshiisa ka hartay.
2- In laga saaray ciidamada dawlada Soomaaliya.
3– In laga xayuubiyey derejadii ciidanka uu ka hayey.
4– In laga mamnuucay qabashada wax xil ah ciidamada qalabka-sida.
Jeneraalkan hore oo muddo ka maqnaa Muqdisho ayaa dhamaadkii bishii Ocotober ee sanadkii hore ee 2013 ciidamada amaanku ka qabteen guri ku yaalla deegaanka Madiina, waxaana la dhigay xabsiga.
Afhayeenkii maxkamadda ciidamada qalabka sida, Col. C/llaahi Max’ed Muuse (Kayse) ayaa xilligaas sheegay in taliyahaas hore lagu qaadayo xukunkii hore ee ay maxkamaddu ku xukuntay isagoo maqan, kaasoo ahaa xabsi daa’in.
“Maxkamaddu waxay xukun madaxaa-ha-ku-furto ah ku ridday taliyihii hore ee ciidamada Asluubta oo dalka ka maqan, xukunkiisana kaas ayuu ahaan doonaa, haddii ay jiraan dambiyo kale oo soo kordhay, waxaa loogu dari doonaa kuwii hore,” ayuu hadalkiisa ku daray Col. Kayse.
Laamaha amaanka Soomaaliya ayaa markii gacanta lagu dhigay Cabdi Maxamed Ismaaciil waxey ku tilmaameen dambiile, waxeyna sidoo kale xuseen inuu qaadanayo xabsi daa’inkii maxkamadda ciidamadu ku riday.
Lama sheegin in Jeneraalka hore dib u eegis lagu sameeyey kiiskiisa oo markaas dambi lagu waayey ee wuxuu afkiisa ku sheegay in madaxweyne Xasan uu cafiyey, uusana qabin wax dood kale ah.
Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa xasbiga laga soo saaray isgoo ku labisan dereeska ciidamada Asluubta Soomaaliya, weliba wuxuu u muuqday nin u labistay sidii isagoo haya xilkii horay looga qaaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo markii la doortay jeediyey khudbooyin aad u adadag ayaa u muuqda mid soo dabcaya, iyadoo sida muuqata ay saameyn ku yeesheen xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya.